Thread horonam-peo Information - China Mandrakizay Friendship Ptfe Tape
Thread horonam-peo ampiasaina mba hamehezana, fikojakojana, ka hisorohana ny threaded mihitsy ny handrombaka fahefana tamin'ny horonan, studs, ary Fittings. Mahazatra izy ireo antsoina hoe:
PTFE kofehy tombo-kase kasety
plumber ny scotch
Thread horonam-peo matetika vita amin'ny polytetrafluoroethylene (PTFE), ny tena manjelanjelatra.Mangatsakatsaka, perfluorinated polymer izay fantatra kokoa amin'ny ny Dupont marika sy famantarana-Teflon voasoratra anarana. PTFE scotch manana tena ambany dia ambany coefficient ny friction, fanoherana simika tsara ary ny tsara ho fanoherana hafanana. Inertness simika misakana fifandraisana hazo fijaliana-ary mahatonga PTFE kofehy horonam-peo safidy tsara ho an'ny fampiharana izay tafiditra manimba tsikelikely ranoka simika toy ny oksizenina, na caustics toy ny ammonium hydroxide. Thread horonam-peo koa ho amin'ny polyethylene (PE), ny vidiny ambany dia ambany-plastika izay manohitra ny rano sy ny zavatra simika maro.
Thread fepetra arahana mitondra horonam-peo toy ny hoe:
PTFE kofehy kasety mpamatsy mamaritra ny vokatra toy ny na avo-hakitroky na ambany-hakitroky. Hakitroky PTFE avo-kofehy horonam-peo matetika manana hakitroky ny .70 g / cm3 na 1,2 g / cm3. Low-hakitroky PTFE kofehy horonam-peo matetika manana hakitroky ny .37 g / cm3. Tensile kery ny hery ilaina mba handika tapa-kofehy amin'ny alalan'ny kasety manongotra amin'ny faran'ny mifanohitra. Elongation no fractional mitombo amin'ny kofehy ny halavan'ny kasety noho ny adin-tsaina eo amin'ny fihenjanana, na ho mafana fanitarana. Zava-dehibe ny tari-dresaka horonam-peo lafiny for ahitana lavany, sakany, ary ny hateviny. Mikasika ny substrate mifanentana, ny sasany Teflon horonam-peo fa natao ho ampiasaina amin'ny sodina, tahaka ny fantsom, na vita amin'ny aluminium conduits, mainty vy, na varahina. PTFE hafa kofehy tombo-kase kasety manaraka ny Chrome, varahina, fitaratra, plastika, na fingotra.
PTFE kofehy horonam-peo fototra roa manaraka ny fenitra sy ny kalitao loko-kolaka izany ho isan-karazany ny fampiharana. Mil-T-27730A dia miaramila US famaritana (Mil-SPEC) izay mamaritra farafahakeliny sakan'ny 3 mils. AA-58092 dia ara-barotra izay fitsipika hatrany koa ny hatevin'ny fepetra ny Mil-T-27730A, fa manampy ny hakitroky fenitra ambany indrindra. White PTFE kofehy mafy kasety dia manome tombo-kase ho an'ny isan-karazany threaded tonon-taolana, ary tsy mety ho an'ny ankamaroan'ny fantson-drano sy ny rano madio rafitra. Yellow PTFE kofehy kasety Natao ho ampiasaina amin'ny sodina, conduits, horonan, valves, ka mandatsa-dranomaso threaded andalana izay mitondra rivotra, amoniaka, butane, chlore, na hydrogène. Pink Teflon kasety na ny fanaka mavesatra-adidy, orinasa kilasy PTFE ary ampiasaina amin'ny orinasa ara-barotra, na fantson-drano fangatahana. Green Teflon kofehy horonam-peo azo ampiasaina amin'ny oksizenina-piadina fampiharana.